ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ရှင်သန်ခြင်း ဥပဒေဿ
ဥပဒေဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မြင်တဲ့လူနဲ့ သတ်ဆိုင်မယ်
ကောင်းတဲ့လူတွေအတွက် ဥပဒေဟာ ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပေမယ့်
မကောင်းတဲ့လူတွေအတွက် ဥပဒေဟာ ပြစ်ဒဏ်ပေးတာပဲ
ရှင်သန်နေရတဲ့ ဘ၀ကို ဘယ်လို သုံးသပ်မလဲ.သုံးသတ်သူနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါတယ်။
စိတ်မပျက်နဲ့ အားမငယ်နဲ့ မနက်ဖန်အကြောင်းမတွေးနဲ့
လောလောဆယ်လောကထဲမှာ သောကကင်းဝေးပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေနိုင်ရေးက အရေးကြီးဆုံးပါပဲ အဲဒီက နေတဆင့် ကျုပ်တို့ရဲ့ အနာဂတ်ကိုလှပအောင် တဘဝချင်း တဆင့်ချင်း ပျိုးထောင်သွားကြတာပေါ့ဗျာာာ
တခါတခါကျပြန်တော့ ပန်းတိုင်တခုဆုံးတိုင်း နောက်ပန်းတိုင်တခုရောက်လာတတ်ပြန်ရော. တခါတခါကျပြန်တော့ ပန်းတိုင်ကိုအရောက်သွားရင်း ပန်းတိုင်ပျောက်နေတတ်ပြန်ရော. အနတ္တလို့ နှလုံးသွင်းရင်း ရှေ့ဆက်ဖို့ အင်အားတွေမွေးရတာကပဲ ဘဝလား မသိပါဘူးမောင်မျိုးရယ်
ဘဝ ရှင်သန်ခြင်း ဥပဒေဿလေးတွေကို အလေးအနက်ထားပြီး ဖတ်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
(ကဗျာလေးရဲ့ ပထမတစ်ကြောင်းမှာ ပန်းတိုင်အစား ပန်းတိုင်းဖြစ်နေတာလေးကို လက်တို့လိုက်ရပါစေရှင်။မြတ်ဆီ စာလာဖတ်တဲ့အခါတိုင်းလည်း စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံလေးတွေ လွဲချော်နေတဲ့အခါ၊ စာလုံးအကျအပေါက်လေးတွေ ဖတ်မိတဲ့အခါ ပြင်ဆင်ဖို့ သတိပေးပါဦးလို့)